Barea de Madagascar: nikotrana teny amin’ny Pedro | NewsMada
Barea de Madagascar: nikotrana teny amin’ny Pedro
Vao nigadona teto an-tanindrazana, ireo mpilalao mila ravinahitra avy any Frantsa dia efa niatrika ny fanazarantena, omaly talata. Fanomanana, notarihin’i Nicolas Dupuis, ary notanterahina teny amin’ny kianja Pedro Andralanitra. Nahatratra 17 ireo niatrika izany, tsy mbola nisy avy eto an-toerana.
Anisan’ireo efa nanatanteraka izany, ry Faneva Ima, Debakely, Morel, Dabo, Caloin, Fontaine ary ireo hafa. Voalaza fa tsy nandalo nilaza ny fahatongavany tany amin’ny federasiona ry zalahy fa avy hatrany dia nandeha namonjy toerana iray any amin’ny faritra Ambohimangakely.
Nicolas Dupuis, mpanazatra no hany nandalo tao amin’ny federasiona, omaly nanambara fa efa tonga eto avokoa ny ankamaroan’ireo mpilalao avy any ivelany. Nilaza ny toerana itobian’ny Barea koa ny tenany, izay nomarihiny fa voaaro tsara fa tsy misy atahorana. Araka ny fantatra, hamonjy an-dry zalahy ireo, manomboka anio alarobia, ireo mpilalao avy eto an-toerana.
Manahy ny tomponandraikitra eo anivon’ny federasiona malagasy fa misy olona mamorona federasiona hafa ihany koa any ho any. Marihina fa efa ny sekretera jeneralin’ny federasiona no misahana ny lalao hikatrohana amin’i Soudan, ny alahady ho avy izao, eny Vontovorona.